April | 2009 | Zizawa's refuge
Posted by zizawa ⋅ 30/04/2009 ⋅ Leaveacomment
မှတ်ဖွယ်မှတ်ရာ သူတို့စာ “သူ့ကျွန်ဘ၀က ဦးဇော်ဝိတ်သည် ကမ္ဘာ့အလေးမပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်နွှဲရန် ဂျာမနီသို့ သွားခဲ့သည်။ သို့သွားစဉ်က ‘မြန်မာ’ ဆိုသည်ကို ကမ္ဘာကမသိ။ ဦးဇော်ဝိတ် ပါဝင်ယှဉ်နွှဲလိုလျှင် အိန္ဒိယသားအဖြစ်သာ ပါနိုင်မည်ဆို၍ ထိုအလေးမပြိုင်ပွဲတွင် နိုင်ငံလိုက် ချီတက်ပြကြရာ၌ ဦးဇော်ဝိတ်သည် ပန်ချာပီခေါင်းပေါင်းကို ပေါင်း၍ မြန်မာဇာတ်ကိုမြှပ်ကာ ပါဝင်ခဲ့ရသည်ဟု သူကိုယ်တိုင်ပြောပြခဲ့ဖူးသည်။” (ဗိုလ်မှုးဘရှင်၊ စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ သမိုင်းစာတန်းများ ပုဂံ၊ ရန်ကုန်၊ ၁၉၆၈၊ စာ ၁၁၃)
Posted by zizawa ⋅ 11/04/2009 ⋅2Comments
မနေ့က Shawshank Redemption ကိုပြန်ကြည့်ရင်း Andy ကို ဗမာဘလော်ဂါတွေအဖြစ် မြင်ယောင်လာလို့ အဲဒီ scene လေး ဝေငှလိုက်ပါတယ်။ Red: “I have no idea to this da[te] what those two Italian ladies were singing about. Truth is, I don’t want to know. Some things are best left unsaid. I’d like to think they were singing about something so beautiful, it can’t be … Continue reading →
ရန်ကုန်…ကျွန်မတို့ရဲ့ရန်ကုန် အခုမြင်နေရတဲ့ ရန်ကုန့်ရဲ့ မြို့သက်တမ်းက တိုတိုလေးပဲရှိပါသေးတယ်။ အင်္ဂလိပ်တွေ အောက်မြန်မာနိုင်ငံကို ၁၈၅၂မှာသိမ်းအပြီး တနှစ်အကြာ ၁၈၅၃မှာ ဗြိတိသျှအင်ဂျင်နီယာ ဖရေဇာ Fraser က မြို့ကို အကွက်ချပြီး ပြန်ဆောက်ပါတယ်။
Posted by zizawa ⋅ 04/04/2009 ⋅ Leaveacomment
ကျောင်းတွေမှာ အင်္ဂလိပ်လိုသင်မလား။ တရုတ်လိုသင်မလား အငြင်းပွားနေတဲ့ ဟောင်ကောင်နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးအကြောင်း သိကောင်းစရာ။ HONG KONG’S ENGLISH TEACHING CONUNDRUM http://www.hkjournal.org/archive/2009_summer/3.htm တွဲဖတ်စရာ… 1) ဗမာ့ပညာတတ်များ နှင့် စင်ဒရဲလားအတွက် ဖိနပ်တဖက် 2) ရှုထောင့်တစုံ ရဲ့ မှတ်ချက်စကား